Saafi Films - News: Shacabka kunool suuqa xoolaha oo ka cabanayo ciidamada DF Somaliya
Shacabka kunool suuqa xoolaha oo ka cabanayo ciidamada DF Somaliya
Qaar kamid ah Shacabka ku dhaqan XaafaddaSuuqa xoolaha ee Degmada Hiliwaa ayaa waxaa ay inoo sheegeen in ay dhibaato ku qabaan Ciidanka Dowladda Somalia gaar ahaan kuwo ku sugan Xaafadda Suuqa xoolaha.
�habenkii ma u bixi karno banaanka maxaayeelay waxaan ka baqeynaa Ciidamada ,waxaana ay inoo diidaan in aan dibadda guriga u soo baxno�ayuu yiri mid ka mid ah dad ka ku nool Suuqa xoolaha oo diiday in magaciisa la shaaciyo.
Dadka Shacabka ah ayaa Masuuliyiinta Dowladdawaxaa ay ka codsadeen in ay waxka qabtaan dhibaatadaan ay ku hayaan Ciidamada dowladda eejooga Suuqa xoolaha.
Waxaa sidoo kale Xaafadaas ku nool dadganacsata ah oo ka xamaasha Suuqa bakaaraha ,kuwaasoo aan ganacsigooda ku soo daahi Karin ,maxaayeelay waxaa ay ka baqayaan in Ciidanka ay waxyeeleeyaan.
Suuqa xoolaha ayaa waxaa uu kamid yahay Xaafadaha ay Ciidamada dowladda dhibka ku hayaan ,waana Xaafad ay deganyihiin dad farabadan.
4,503,040 unique visits